VIDEO: Boqolaal katirsan ciidanka Puntland oo qoobka ciyaar ku soo bandhigay magaalada Qardho.
September 16, 2020 Xuseen 10
Guddiga dibu habaynta iyo diiwaangelinta ciidamada Puntland ayaa maanta kormeer kutegey xerada tababarada ciidamada ee Xorgoble Qardho, halkaasi oo ay ku tababaranayaan ciidamo katirsan booliska Puntland.
Guddoomiyaha guddigaasi ahna wasiirka maaliyadda Puntland Xasan Shire Abgaal oo ay weheliyaan taliyayaasha ciidamada ayaa booqday boqolaal katirsan ciidanka Puntland oo muddo dhowr bilood ah tababar u socdey.
Mas’uuliyiinta ayaa daawaday qoobka ciyaar ay samaynayeen ciidankaani oo maalinimada berri ah tababar loogu soo xiri doono magaalada Qardho, waxaana intaas ka dib la gelin doonaan diiwaanka rasmiga ah ee ciidamada.
Waxaa jeclaan lahaa tukaraq iyagoo Ku dhaanteeya.
Ciidanka Somaliland Garowe bay Ku hilbo qalayaan.
Baraagaha qol oo qardho kulalaaysa bay saldhig military ka samaysteen.
Waxbaa BAKH yidhi.
Fuleygu inta nabada la joogo nacnac lagama waayo, somaliland 20 sanno ayay weerar Soo ahayd waxayna qabsatay 180km waqtiga intaas le,eg. Puntland maalinta ay dagaal qaado u malayn maayo in ciidanka somaliland burco ka sokeyn doonaan weliba asbuuc gudihiis. Hala adkaysto xafaayadana Hala sii gato. Soomaali way istaqaan.
Dance iyo qoob ka ciyaar!!!!
Xaflad mise baar miyay joogaan?????????
Gaardis Ku bedela haday daacad idiinka khaldantay
Qoraagu wuxu ogyahay in tababar aanu jirin ee qoob ka ciyaar uun wuxuba yihiin dee
war marka hore Puntland,uma baahna ciidan fara badan,oo aan loo hayn mushaar.dufcadii ka horaysay kuwan waa kuwii qaar ka mid ah,ay baxsadeen,qoryahoodiina iibsadeen,timirtii horaba dab loo waa.
Maamulada hargaysa iyo kuwa kale ee Soomaaliya maantay ka jira,xitaa kuwa dowlada federaalka ayaan,si joogta ah u helin mushaar.
Marka waa in caqligo shaqeeyo,oo aan la qorin,ciidan aan marka hore la hubin,in la baahanyahay iyo in la siinkaro,mushaar iyo wixii xuquuqa ah
Dr Abdulahi says:
Malaha Gaada ka cayaar ayuu u jeeday qoraagu lkn tafatiraha ayay ahayd inuu saxo lakiin inaan la daadin ayaa muuqata bal waxaan codsanayaa ina la ilaaliyo afka dhaqanka iyo tayada qoraalada
Dakaalka Daaneayne ay Puntland ku wadaan tolow xagee gaaridoonaa. Daanwayne waa laf yar oo tiro ahaan 140 qof aan ka badnayn, balse ka xin iyo xasarad badan cid walba. Daanwayne waa familka Farah Gaylan Farah faaruq Qoor cuqdad Puntland ay caloosha ka gashay. Farah faaruq was loser Farmaajo sandareero ka qaata jirkiisana ka ganacsada. Puntland waxaad page kaaga kusoo malmuluuqdo waxba ugama bi in kartid laguna baray inaad jirkaaga iibiso.
Tukaraq iidoor waxaa ku haya caada Qaate MAHAD CANBASHE oo ah JAAMAC SIYAAD.
Iidoor hadduu awood Leeyahay buuhoodle ha tago.
Iidoor jaamac siyaad hakaa qayilo dhib malaha laakiin waxaan kuu sheegaya NEVER AQOONSI NEVER.
war ninkaan puntland waxba uma dhimi karo waa iska hadle ma guulwade buu ahaan jiray horta waa yaabe guulwadsha baa cuqdad haysaaye
cadi ma aha ciidamada darawiishta tukaraq in ay cagta mariyeen ayay hayd iyo gobalada dariska ah ilaa buuhoodle loo diro iyo dhulkii sayidka marijiray
Madaxweynaha Puntland oo maanta lagu caleema saarayo magaalada Muqdisho